Manchester City oo lacago qaali ah u diyaarsatay si ay Real Madrid kula dagaalanto saxiixa xidigan – Gool FM
Manchester City oo lacago qaali ah u diyaarsatay si ay Real Madrid kula dagaalanto saxiixa xidigan
(Man City) 18 Maajo 2018. Manchester City ayaa isha ku heysa go’aanka Eden Hazard ee kooxda Chelsea. Maadaama ay Sky Blues ka fiirsaneyso In ay kulasoo saxiixato xidigan dalab qaali ah.
Sida uu daabacay wargeyska “Sun” ee dalka England Man City ayaa waxay dooneysaa in ay Real Madrid kula dagaalanto saxiixa Eden Hazard, kooxda Pep Guardiola ayaan wax dhibaata ah u arki doonin in ay kulas soo saxiixato xidigan reer Belgium aduun dhan £ 100 million, si ay u helaan adeegiisa.
Manchester City ayaa dhinaca kale xiiseeneysa in xidiga xulka qaranka Belgium ay isbuucii mushaar ahaan u siiso aduun dhan 300,000 pounds Sterling, si ay kaga dul qaado Real Madrid.
Eden Hazard ayaa wuxuu horey u sheegay in uu ka tagayo kooxda Chelsea hadii aysan lasoo saxiixan xidigo cusub ee kooxda u wanaagsan, gaar ahaan xili ay Blues ku guuldareesatay in xili ciyaareedka soo aadan ay u soo baxdo tartanka Champions League.
RASMI: Paul Lambert oo isaga tagay shaqadii tababarenimo ee kooxda Stoke City
Christian Eriksen oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan wadahadalada kooxda Barcelona